5ta codsi ee ugu fiican ee lagu cabbiro Android | Androidsis
5 -ta codsi ee ugu fiican ee lagu cabbiro Android
Had iyo jeer way fiican tahay inaad haysato aalad cabbir meel kasta, maxaa yeelay ma ogid goorta loo baahan doono. Baahida tan ayaa ugu weyn marka aad baranayso xirfad u baahan cabbir ula kac ah oo aan la filayn. Iyo, in kasta oo aaladdaha qaarkood aysan u sax ahayn kuwa loo abuuray ujeeddooyin cabbir sax ah, waxaa jira codsiyo bixiya qiyaaso aad u sax ah oo leh saxnaan aad u wanaagsan, waana kuwan kuwa ugu wanaagsan ee laga heli karo Dukaanka Google Play ee Android.
Qoraalkan ururinta waxaan ku taxnaa barnaamijyada cabbirka ugu fiican ee aad hadda ka heli karto dukaanka Play -ka ee aan soo sheegnay oo bilaash ah. Dhammaantood waxay ka mid yihiin kuwa ugu caansan oo, isla mar ahaantaana, laga soo degsaday dukaanka. Dhanka kale, waxay soo bandhigaan shaqooyin kala duwan iyo astaamo horumarsan si loo helo cabbir sax ah.
Hoos waxaad ka heli doontaa taxane ah barnaamijyada ugu fiican ee lagu cabbiro masaafadaha taleefannada casriga ah ee Android. Waxaa xusid mudan, sida aan had iyo jeer sameyno, taas dhammaan kuwa aad ka heli doontid qoraalkan uruurinta waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad foorjirto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood.
Si kastaba ha ahaatee, mid ama in ka badan ayaa lahaan kara nidaamka lacag-bixinta yar-yar, kaas oo u oggolaan doona helitaanka sifooyinka qiimaha leh iyo helitaanka sifooyin badan, iyo waxyaabo kale. Sidoo kale, lagama maarmaan ma aha in la bixiyo wax lacag ah, waxaa mudan in lagu celiyo. Hadda haa, aan u tagno.
1 ARPlan 3D: Xukunka, Cabirka Cajaladda, Qiyaasta Qorshaha Dhulka
2 Cabirka aagagga iyo masaafada
3 CamToPlan - Qiyaasta RA / Cabirka Cajaladda
4 Taliye - Cabbiraadda Sentimitir iyo Inches
5 Khariidadaha Google
ARPlan 3D: Xukunka, Cabirka Cajaladda, Qiyaasta Qorshaha Dhulka
Si aad u bilowdo qoraalkan soo -ururinta ee cagaha midig, waxaan leenahay ARPlan 3, waa app leh shaqooyin horumarsan oo lagu cabirayo aagagga, walxaha, qiyaasta iyo wax ka badan. Waxa ka dhigaya mid aad waxtar u leh, xitaa xaaladaha ay cabiraaduhu ku adag yihiin, waa adeegsiga Virtual Reality, kaas oo ay ka caawineyso in si caqli leh loo cabbiro labada aan soo sheegnay sida dhererka, sagxadaha iyo qiyamka kale ee sida caadiga ah ay adag tahay in gacanta lagu cabbiro.
Waxaad ku muujin kartaa xisaabinta iyo cabbirrada halbeegyada ama imbaraadooriyadda (cm, m, mm, app app, inch, cagaha iyo taliye dayrka). Waxa kale oo ay leedahay muuqaal qorsheeyaha sagxadda dhinaca 2D waxayna awood u leedahay inay abuurto qorshayaasha sagxadda aragtida dhinac, dhammaantoodna leh Xaqiiqda Virtual gudaha ilbidhiqsiyo gudahood. Si fudud u tilmaam waxa aad rabto inaad ku qabato oo ku cabirto kaameeraha mobiladaada iyo voila, adigoon ku sii socon.
Dhinaca kale, waxay u oggolaanaysaa in lagu kaydiyo cabbirka qorshaha sagxadda faylka Floorplanner iyo abuuro qorshayaasha dabaqa 3D ee qolka oo cabbir kasta la cabiray. Sidoo kale, haddii aad rabto inaad ogaato barxadda sagxadda, barxadda derbiyada iyo in ka badan, waxaad ku ogaan kartaa codsiyadaas; Xogta la helay waxay noqon kartaa mid waxtar u leh qiyaasidda tirada agabka dhismaha, sidaa darteed ARPlan 3D ayaa sidoo kale loo saadaalinayaa inay tahay aalad wanaagsan oo lagu qiyaaso cabbiraadaha.
Codsigan ku jira Dukaanka Play -ka ayaa ah midka ugu wanaagsan dukaankiisa, maadaama uu aad u dhammaystiran yahay oo uu leeyahay ficil ahaan wax kasta oo laga helo inta badan barnaamijyada ugu dhammaystiran ee noociisa ah. Waxay leedahay qiimeyn 4.4 xiddig ah oo si xushmad leh, iyo sidoo kale in ka badan 1 milyan oo la soo dejisto iyo ku dhawaad ​​50 faallooyin togan.
Cabirka aagagga iyo masaafada
Shaqooyinka ugu muhiimsan ee barnaamijkan waxaa ka mid ah garaaca xawaaraha aagga iyo masaafada oo isku mid ah, si aad u hesho cabbirrada u dhigma waxaad rabto inaad ku xisaabiso ilbidhiqsiyo gudahood. Waxa kale oo ay soo bandhigaysaa tallaabooyinka badbaadinta iyo tafatirka, iyo sidoo kale kooxaynta iyo firqooyinka.
Dhinaca kale, waxay la timaadaa shaqooyin aasaasi ah oo ay ku jirto ikhtiyaarka ah in la tirtiro dhammaan falalkii cabbirkii hore. Maxaa ka sii badan, waxay ku socon kartaa GPS socodka, socodka ilaa xad gaar ah, waxayna leedahay tusaha is-cabbiridda. Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad u dirto xiriir toos ah oo la “sumadeeyay” aagga la xushay, cinwaanka iyo waddada saaxiibbadaada ama shuraakadaada si aad ugu tusto goobta aad rabto inaad tusto.
App -kan waa mid aad u fudud in la isticmaalo, markaa wax dhib ah kuma qabtid inaad ka faa'iidaysato dhammaan shaqooyinkeeda cabbirka aagagga iyo masaafadaha goob kasta iyo shay kasta. Isla mar ahaantaana, sidoo kale aad bay caan ugu tahay qaybteeda, iyada oo in ka badan 10 milyan la soo dejisto iyo qiimeyn 4.6-xiddig oo aad u fiican dukaanka Android.
CamToPlan - Qiyaasta RA / Cabirka Cajaladda
Qalab kale oo aad u fiican oo lagu fuliyo cabbiraadaha, xisaabinta iyo wax kasta oo aad rabto inaad ka ogaato aagagga iyo masaafooyinka waa CamToPlan, codsi bilaash ah oo sidoo kale laga heli karo Dukaanka Play.
Hawlaheeda iyo astaamaheeda ayaa suurtogal ka dhigaya in lagu cabbiro ficil ahaan wax kasta ilbidhiqsiyo gudahood iyo aad u fudud. Waxba ma laha haddii shayga iyo qaabkiisu u taagan yihiin si siman ama taagan. Waad garan kartaa dhererkiisa, masaafadiisa, aaggiisa iyo in ka badan. Waa taliye dalwadle ah iyo cabbir cajalad ah oo la shaqeeya Augmented Reality iyo ARCore (kaliya taleefannada casriga ah ee la jaan qaada).
App -kan ayaa la socdan mitir laser ah oo kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh u hesho macluumaad ku filan oo ku saabsan walxaha iyo aagagga. Su'aasha, waxaad ku muujin kartaa xisaabinta laga helay cabbirro kala duwan, kuwa ugu badan, sida sintimitir iyo mitir. Isla mar ahaantaana, waxaad ku sawiri kartaa khadadka cabbirka 3D adigoo uga mahadcelinaya kamaradda tooska fiidiyaha taleefankaaga gacanta ama miisaska oo dhoofin kara qorshayaasha laga helay faylasha sawirka PNG ama DXF.
Qalabkan, oo la siiyay dhammaan shaqooyinka iyo astaamaha uu ku faano, ayaa ku habboon qurxiyaasha maaddaama ay oggolaanayso in la cabbiro dhererka darbiyada guriga ama aqalka, iyo sidoo kale cabbirrada ficil ahaan dhammaan shay kasta oo leh khad toosan oo xisaabiya aagagga qolka, musqulaha iyo dhammaan meelaha gudaha ah. Sidaa darteed, waxaa habboon in la qiyaaso qiimayaashan dhismaha, in kasta oo ay mudan tahay in la ogaado in tirooyinku ay noqon karaan kuwo qiyaas ah oo aan had iyo jeer sax ahayn.
Sidoo kale, sidii haddii aysan taasi ku filnayn, tan app cabirka dhererka wuxuu samayn karaa qiyaasaha qiimaha dhismaha wuxuuna u shaqeeyaa sida cabbir cajalad sare leh.
Developer: Daabacaadaha Tasmanic
Taliye - Cabbiraadda Sentimitir iyo Inches
Marna ma xumaato in taliye gacanta lagu hayo, laakiin ma aha mid jir ahaaneed, laakiin mid taleefan ah. Sababtaas awgeed, dalabkani wuxuu galayaa qoraalkan ururinta, maadaama ay tahay mid aad si fudud ugu cabbiri karto masaafadaha gaagaaban iyo cabbirrada walxaha yar yar si aad ugu muujiso cabbirkooda sintimitir iyo inji.
Waa, iyo ilaa hadda, codsiga liiskan ayaa ka fudud oo ka fudud dhamaan wixii aan ilaa hada soo bandhignay. Oo waa inay ku leedahay culeys dhan 1.95 MB dukaanka, sidaa darteed soo dejintu ma qaadan doonto wax ka badan dhowr ilbidhiqsi, in kasta oo tani horeba ugu tiirsan tahay oo keliya xawaaraha Internetka ee aad haysato.
Its interface sidoo kale waa mid fudud oo si sahlan loo fahmi karo. Kaliya fur oo bilow inaad cabirto waxaad rabto. Waxaad u adeegsan kartaa sidii maamule dugsi si aad ugu cabirto buugaagta xusuus -qorka, buugaagta, iyo inbadan. Faa'iidadiisa waxay ku kasbatay sumcad xiddig 4.3 ah Dukaanka Play.
Si aad wax yar uga baxdo khadka, waxaan haysannaa Khariidadaha Google, codsi GPS ah oo aan bixin kaliya aragtida khariidadaha adduunka, waddamada, magaalooyinka, degmooyinka iyo magaalooyinka, laakiin sidoo kale cabbirka masaafada u dhexeysa laba dhibcood. Waad garan kartaa masaafada u dhexeysa magaalo iyo meel iyo ficil ahaan meel kasta oo adduunka ah. Waxa kale oo aad waxtar u leh in la ogaado inta ay kugu qaadanayso inaad gaarto meel cayiman haddii aad ku socoto lug, baabuur, baaskiil ama nooc kale oo dhaqdhaqaaq ah.
Dhinaca kale, Barnaamijkan kuma baahin karo shaqooyinka caadiga ah ee khariidada iyo GPS. Waa mid ka mid ah kuwa ugu dhammaystiran ee loogu talagalay Android waxayna ka timid Google, sidaa darteed sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la soo dejisto oo laga isticmaalo adduunka oo dhan, wax inta badan sabab u ah xaqiiqda ah in horay loogu rakibay warshadda ku dhawaad ​​dhammaan taleefannada gacanta leh nidaamyada hawlgalka. ee suuqa (marka laga reebo Huawei, maadaama aysan lahayn adeegyadii Google).
Khariidadaha Google waxaad sidoo kale ku samayn kartaa fiiri meel kasta habab kala duwan oo ka hel meel kasta, makhaayadda iyo wax kasta oo aad ka fekeri karto oo kaliya adoo magaca cinwaanka ku dhejinaya baarka raadinta. Waxay kaloo kuu oggolaanaysaa inaad ogaato haddii ay jiraan hoteello la heli karo, saldhigyo adeeg. shineemooyinka, xarumaha wax laga iibsado, isbitaalada iyo rugaha caafimaadka, guryaha, beeraha iyo wax kasta oo horay uga diiwaan gashanaa Google. Taa baddalkeeda, waxay la timaadaa hawl kuu oggolaanaysa inaad ogaato boqolleyda isku -dhawaanshaha si aad u aragto meelaha ay yihiin kuwa aad u badan tahay inaad aad u jeceshahay.
Dabcan, waxay kaloo leedahay hawl hagitaan oo kaa caawin doonta inaad gaarto dhammaan meelaha aad rabto oo waliba ku tusaya masaafada aad tegayso iyo waqtiga qiyaasta imaanshaha. Waxay kaloo kaa caawineysaa inaad ka fogaato taraafikada dhibka badan. Waana barnaamij leh in ka badan 5 bilyan oo la soo dejisto iyo miisaan qiyaastii 28 MP ah dukaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 5 -ta codsi ee ugu fiican ee lagu cabbiro Android
6-ta kulan ee ugu fiican pinball-ka Android
Xeeladaha ugu fiican ee Mario Kart Tour